Guqula ividiyo ibe yi-MP4 iye kwi-DVD ne-DVD iye ku-MP4 🥇 Emulator.online ▷ 🥇
Abasebenzisi abaningi phakathi kuka-2000 no-2009 baqoqe inani elikhulu lama-DVD ezentengiso ama-movie noma ama-disc enziwe ekhaya, angabukwa ngokunethezeka ehleli kusofa nomdlali okhethekile. Eminyakeni elandelayo, ukusetshenziswa okubanzi kwezinsizakalo zokusakaza namapulatifomu aphathekayo kwehlise kakhulu lo mkhuba, okuholele kumaDVD aqoqa uthuli kwamanye amadrowa.
Uma sifisa gcina amavidiyo aqukethwe ku-DVD kufayela ledijithali noma okuphambene nalokho (letha i-MP4 kwi-DVD), kulo mhlahlandlela sizokubonisa zonke izinhlelo zamahhala ezenzelwe lezi zidingo, ukuze ukwazi ukulawula okuphezulu kokuqukethwe kwama-disc optical nokuthi yini okufanele uyigcine nokuthi yini okufanele uyilahle.
FUNDA NONKE: Kanjani guqula ividiyo ne-DVD ibe yi-MP4 noma i-MKV kwi-PC naku-Mac
Ungaguqula kanjani amavidiyo we-DVD abe yi-MP4 (kanye neVossa)
Ezahlukweni ezilandelayo sizokukhombisa izinhlelo zamahhala esingazisebenzisa kukhompyutha yethu ukuguqula ama-DVD Video optical discs abe amafayela wevidiyo we-MP4 futhi okuphambene nalokho (bese wenza ama-DVD Videos kusuka ku-MP4 eyodwa noma ngaphezulu). Zonke izinhlelo zingasetshenziswa ngaphandle kwemingcele yesikhathi noma imikhawulo ngosayizi wamafayela noma i-DVD ezokwenziwa, ukuze sizisindise ekuthengeni izinhlelo ezibizayo nezisasetshenziswa manje.
Izinhlelo ukuguqula DVD MP4
Uhlelo lokuqala esiluncomela ukuzama ukuguqulwa kwe-DVD yedijithali yi-HandBrake.
Ukuze usebenzise lolu hlelo, siqala ngokufaka iDVD kusidlali, linda imizuzu engu-2, bese uqala uhlelo bese ukhetha isidlali se-DVD esizolayisha ividiyo.
Uma ividiyo isilayishiwe kusixhumi esibonakalayo, sihlola ukuthi yimaphi amathrekhi evidiyo nawomsindo okufanele uwagcine, sikhetha ukuthi kanjani ifomethi ifomethi MP4, sakha njenge Hlela kabusha izwi 576p25 bese sicindezela phezulu Qala ukufaka amakhodi.
Njengenye indlela evumelekile kwi-HandBrake singasebenzisa uhlelo lwe-VidCoder.
Ku-interface elula singalayisha okuqukethwe kunoma iyiphi i-DVD Video, sikhethe ukuthi yimaphi amathrekhi alalelwayo nevidiyo okufanele uwagcine, ukhethe ukuthi uzohlanganisa imibhalo engezansi, ukhethe iphrofayili yokuguqula (ku Izilungiselelo zokufaka ikhodis) bese ekugcineni uguqula idiski ibe yifayela le-MP4 ngokucindezela Guqula.
Uma esikhundleni samafayela we-MP4 sifuna ukonga i-DVD Video ku-MKV (ifomethi entsha futhi ehambisana ne-Smart TV), singasebenzisa ithuluzi lamahhala nelisebenza kahle njengeMakeMKV.
Uhlelo olulula kunazo zonke ongalusebenzisa ukuguqula iDVD lube amafayela wevidiyo edijithali alutholakali: ukulusebenzisa sivula uhlelo, ukhethe idiski ebonakalayo ozothatha kuyo ividiyo, ukhethe amathrekhi ongawonga, ukhethe indlela yokulondoloza ifayela elisha bese ucindezela Yenza i-MKV ukudala ukuguqulwa.
Uma usaqala futhi ungakwazi ukusebenzisa i-HandBrake ne-VidCoder, lolu uhlelo lwakho!
Guqula i-DVD evikelwe
Uma sizama ukusebenzisa izinhlelo ezimbili zokuqala ezinconywe ngenhla nge-DVD evikelwe, ngeke sikwazi ukuguqulela ku-MP4, siyibonile ukuvikelwa kokulwa namakhophi okwakhelwe kwimidiya yoqobo emakethe. Ukuphela kwaso esinohlelo olususa ukuvikela yiMakeMKV, kepha kungenjalo futhi singasebenzisa olunye lwezinhlelo ozibona kusiqondisi sethu Izinhlelo ezinhle kakhulu zokukopisha i-DVD (rip) kwi-PC.
QAPHELA: ukususa ukuvikelwa ukwenza amakhophi wakho siqu akulona icala, okubalulekile ukuthi amakhophi awalokothi ashiye indlu yethu (asikwazi ukuwasabalalisa noma ukuwathengisa).
Izinhlelo ukuguqula MP4 DVD
Ngakolunye uhlangothi, uma sidinga uhlelo lokuletha i-MP4 ku-DVD Video (ngakho-ke iyahambisana nama-DVD DVD players), sincoma ukuthi uzame i-Freemake Video Converter khona manjalo.
Ukuyisebenzisa, faka iDVD engenalutho kwirekhoda, qala uhlelo, cindezela inkinobho. Ividiyo kwesokudla phezulu, khetha amafayela we-MP4 ozowaguqula, cindezela inkinobho kuDVD ukwethula ngezansi futhi ekugcineni uqinisekise ku- Shisa. Ewindini elifanayo singakhetha ukuthi senze imenyu ye-DVD nekhwalithi yokuguqulwa, noma ngabe imingcele eyisisekelo ingaphezu kokwanele ukwenza amavidiyo we-DVD amahle.
Olunye uhlelo oluhle kakhulu lokuguqula i-MP4 ibe yi-DVD yi-AVStoDVD.
Ngalolu hlelo singaguqula ngokushesha amavidiyo we-MP4 abe yifomethi ehambisana ne-DVD Video, ukuze sikwazi ukushisa i-disc ebonakalayo ngokushesha. Ukwengeza amavidiyo, chofoza nje Vula, ngenkathi siqala inqubo yokuguqula sicindezela inkinobho qala.
Uma ufuna uhlelo oluphelele futhi olucebile ukuletha i-MP4 kwi-DVD, sikumema ukuthi uzame i-DVD Author Plus.
Ngayo, ungalayisha ngokushesha wonke amafayela we-MP4 esihlahleni sefolda esakhelwe ngaphakathi ngaphandle kokuvula imenenja yefayela isikhathi ngasinye ukuze uqedele ukwenziwa kokugcina kwediski ebonakalayo. Lapho okwethu Ibhodi lezindaba okukhonjiswe ngezansi kuqediwe, setha imingcele ye-DVD engxenyeni efanele yewindi, shaya Okulandelayo phezulu bese uqedela imisebenzi evuthayo.
Ukuthola ezinye izinhlelo eziwusizo zokuguqula i-MP4 ibe yi-DVD, funda eyethu umhlahlandlela we guqula i-MKV ku-AVI noma ushise i-MKV ku-DVD.
Ngezinhlelo ezibalwe ngenhla sizokwazi ukwenza zonke izinhlobo zokuguqulwa kusuka ku-MP4 kuye kwi-DVD nokusuka kwi-DVD kuye ku-MP4, ukuze sikwazi ukugcina ama-disc angamehlo ama-movie ethu okugqashuka nokudiliza futhi ngasikhathi sinye senze ama-DVD esizonikeza izihlobo zethu esezikhulile noma esinazo. yama-DVD player amadala asasebenza.
Komunye umhlahlandlela sikubonise ezinye izinhlelo okufanele uzenze guqula i-DVD ibe yi-MP4 ukuze ubuke amavidiyo ku-iPhone, ukuze amavidiyo (avela ku-DVD) ahambisane nesidlali esakhelwe ngaphakathi ku-iPhone.
Uma kunalokho singathanda ukuguqula amavidiyo ukuze siwabuke ku-Android, sikudlulisela kusiqondisi sethu Guqula ama-movie namavidiyo ukuze uwabuke ku-smartphone.
Izinhlobo ze-3D kuGoogle ezinemiphumela ye-AR (izindawo, amaplanethi nomzimba womuntu)
Uwakha kanjani amavidiyo wokuzalwa nephathi
Ungayisebenzisa kanjani i-App IO yezinkokhelo, ukubuyiselwa kwemali nokuxhumana
Imidlalo engcono kakhulu ongayidlala ku-Zoom nomndeni nabangane
Lawula i-Fire TV ngezwi (nge-Echo, i-Alexa ngaphandle kwesilawuli kude)
Ungayiguqula kanjani i-TV ibe yiziko (ividiyo nohlelo
Dala imibuzo emisha enezimpendulo ze-Alexa ku-Amazon Echo
Uhlelo lokusebenza best for Tuning string zomculo
Ungasilayisha kanjani isicelo ku-Google Play Isitolo naku-Apple Store
Umhlahlandlela we-IGTV nokwehluka nge-Instagram
Ungayisebenzisa kanjani ikhamera ye-iPhone: amathiphu nemisebenzi ewusizo